GNOME: Kedu ihe ọ bụ na kedu ka esi etinye ya na DEBIAN 10 na MX-Linux 19? | Site na Linux
GNOME: Kedu ihe ọ bụ na otu esi etinye ya na DEBIAN 10 na MX-Linux 19?
Dị ka ọ dị na mbụ, anyị na-ekwukarị banyere akụkọ kachasị ọhụrụ site na Amị (3.36, 3,34, 3.32, 3.30, n'etiti ndị ọzọ), ha ndokwa ma ọ bụ banyere ụfọdụ njirimara o asụsụ ala karịsịa.
Na nke a, anyị ga-elekwasị anya na Kedu ihe bụ GNOME? y Kedu ka esi etinye GNOME?. Na n'ezie, na-elekwasị anya ugbu a Metadistribution (Nkesa nne) DEBIAN GNU / Linux, nke bụ ugbu a Xdị 10, aha koodu Buster. Otu na-eje ozi ugbu a dị ka ihe ndabere maka MX-Linux 19 (ujo ojoo).
GNOME bụ otu n'ime ọtụtụ ndị ọzọ Ebe Desktọpụ (DE) na-eme ka ndu na ya GNU / Linux Sistemụ nrụọrụ. Na n'ọtụtụ nkesa dị ugbu a ọ bụ ma ọ bụ bụ Ebe obibi Desktọpụ ndabara (ndabere)
Okwesiri icheta nke a, a Ebe obibi Desktọpụ es:
"A software iji nye onye ọrụ nke kọmputa enyi na enyi na mkparịta ụka. Ọ bụ mmejuputa atumatu nke Graphical User Interface nke na-enye nnweta na nhazi, dị ka ogwe ngwaọrụ na mwekota n'etiti ngwa nwere nka dịka ịdọrọ na dobe.". Wikipedia
Na otu Eserese eserese eserese (GUI) es:
"Program Ihe omume kọmputa nke na-arụ ọrụ dị ka ihe eji arụ ọrụ, jiri usoro ihe osise na ihe eserese gosipụta ozi na omume dị na interface ahụ. Isi ihe eji ya eme ihe bu inye onodu uzo di mfe iji kwe ka nkwurita okwu ya na Sistemụ arụmọrụ nke igwe ma ọ bụ kọmputa". Wikipedia
1 Ihe niile gbasara GNOME
Ihe niile gbasara GNOME
A tọhapụrụ ya na ụbọchị nke 3 March nke 1999 ma ugbu a Ebe obibi Desktọpụ Ezubere ka edozi ya n'ụzọ dị mfe ma mara mma na nke ọ bụla GNU / Linux nkesa iji wụnye ya na kọmpụta, ya bụ, iji kwado ojiji na ịchịkwa ọrụ niile, njirimara na ngwa ndị mejupụtara ya, yana ndị ọzọ gbara ya gburugburu. Usoro njikwa. Ma ọ bụ n’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, nye ịdị mfe, ịdị mfe nke nnweta na ntụkwasị obi nye ndị ọrụ.
Aha gị (Gbasara) bụ acronym maka "Gburugburu ihe nlereanya GNU Network". Ihe mejupụtara ya kpamkpam Free Software na Open Source (Free na Open Source Software - Akpa).
Ọ bụ akụkụ nke GNOME oru ngo nke dabere na GNOME Ntọala. Ọ dabere na toolkit GTK +.
Ọ bụ customizable na-eji X Window nkesa ngosi ihe ngosi, ọ bụ ezie na ọ na - emeziwanye njikọta ya na Wayland ma si otú ahụ welie atụmatụ ndị dị ka kinetic scrolling, ikpuru na dobe, na etiti bọtịnụ ịpị.
Otu n'ime ihe ndị e ji mara ugbu a bụ nke ya Bido bọtịnụ na ya Nchịkọta nhọrọ nke ngwa na nhọrọ. Ọ Bido bọtịnụ akpọ ya "Ihe" ma dị na ndabara na akuku aka ekpe nke ihuenyo ma nye gị ohere ịgbanwe n'etiti oghere ọrụ na windo. A na-egosipụtakwa ya ugbu a na nhazi ya na onyonyo dị n'elu ozugbo.
Ugbu a anụ version nke GNOME na Desktọpụ Environment bụ nọmba mbipute 3.34.
Ezigbo ndị ọrụ na nkwado nzukọ siri ike.
Nnukwu obodo nke ndị ọrụ na ndị ntinye aka.
Ogologo na ezigbo akụkọ ihe mere eme trajectory.
Ihe zuru ezu na akwụkwọ zuru ezu.
Nnukwu na usoro obibi siri ike nke ngwa.
Versiondị ya ugbu a (GNOME 3) na-erepịa ọtụtụ Akụ (RAM / CPU) ma e jiri ya tụnyere ọtụtụ.
Ejikọtara ya na iji sistemụ.
Gịnị bụ ihe ọhụrụ na ọhụrụ anụ version maka ọrụ
Gịnị bụ ihe ọhụrụ na ọhụrụ anụ ntọhapụ maka mmepe
DEBIAN webụsaịtị na GNOME
Họrọ GNOME na Desktọpụ Environment na ihe ọ bụla ọzọ na ịba uru ma ọ bụ set nke nchịkọta ndị ọzọ.
Reboot na nbanye site na ịhọrọ GNOME na Desktọpụ Environment, ma ọ bụrụ na inwe ihe karịrị otu Ebe obibi Desktọpụ arụnyere na ọ bụghị na-ahọpụta ndị GDM3 Nbanye Manager.
Cheta na: Mgbe nwalere GNOME na Desktọpụ Environment arụnyere ị nwere ike iwunye na mgbakwunye ngwa ọdịnala na ngwa mgbakwunye dị mkpa nke otu, dika, dika imaatu:
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «Entorno de Escritorio» amara aha «GNOME», otu n'ime ndị kasị eji taa na ụwa nke «Distribuciones GNU/Linux», nwee nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » GNOME: Kedu ihe ọ bụ na otu esi etinye ya na DEBIAN 10 na MX-Linux 19?
Nke a dị ka Gnome monograph karịa akwụkwọ ntuziaka.
Gnome na-abịa dị ka desktọọpụ ndabara na Debian, ọ bụkwa ihe dị mfe na-abịa.
Nsogbu kasịnụ nke onye ọrụ ọhụụ nwere ike izute bụ na ha chọrọ ngwa ngwa anaghị akwụ ụgwọ, nke a ga-atụ aro na installer maka nbudata mpụga.
Ekele Autopilot! Daalụ maka okwu gị. O doro anya na ọ bụ ezie na ederede ahụ pere mpe, ọ zuru oke nke mere na ọ bụ mmalite mmalite maka ndị na-abịa na Linux na gburugburu Desktop ya, na nke a, GNOME. Ọzọkwa, ọ bụ nke mbụ na usoro na GNU / Linux Desktop Environments. Anyị ga-ebipụta nke KDE / Plasma n'oge na-adịghị anya.
A tọhapụrụ ụdị ọhụrụ nke Linux Kernel 5.5 na ndị a bụ akụkọ ya
Depụta ụdị ọhụrụ Solus 4.1 na Kernel 5.4 na ndị ọzọ